Nhau dzakawanda dzeinotevera Apple Watch | Nhau dze iPhone
Kuzvitonga kukuru, mativi matsva, tembiricha sensor uye dzimwe nhau dzeApple Watch
louis padilla | 12/04/2022 17:37 | Yakagadziridzwa ku 13/04/2022 10:57 | Apple Watch, Noticias
watchOS 9 ichave mumwe wevanonyanya kupikisa paWWDC 2022 June anotevera, uye Apple inoita kunge ine zvimwe zvinoshamisa zvatakachengeterwa, semu. Low Consumption mode, mativi matsva, masensa matsva uye satellite yekubatanidza yeApple Watch.
Apple ichawedzera Yakaderera Power Mode kuwatchOS 9 iyo inobvumira mamwe maapplication kuti amhanye nekushomeka kwebhatiri kushandiswa. Anga ari Mark Gurman akatiudza izvi zvakasarudzika mukati Bloomberg. Iyo Apple Watch yatove ne "Reserve" modhi umo isu chatinogona kuita kutarisa nguva. Iyi modhi inovhurwa kana bhatiri reApple Watch yedu rakaderera. Apple inoda iyi Reserve modhi kuti iwedzere uye kubvumira mamwe maficha, kunyangwe mamwe maapplication anogona kumhanya mukati mayo, nekudaro achikwanisa kuwedzera kuzvitonga kwewachi.
Maererano naGurman mativi acho achanakidzwa nekutarisa patsva. Mushure memakore kubva payakatangwa, mativi matsva anga achisvika aine dropper. Ichokwadi kuti gore rapfuura nekusvika kweSeries 7 uye yakakura skrini saizi, mamwe mativi akagadziridzwa kuti atore mukana weiyo imwe nzvimbo, asi vazhinji vedu vanofunga kuti nguva yasvika yekupa yedu Apple Watch chitarisiko chitsva. Chitoro chezviso zvewachi ndicho chinodiwa nevakawanda vedu, chimwe chinhu chinoita senge chisingagoneke kuti Apple itipe panguva ino, saka zviso zvitsva zvinogara zvichigamuchirwa.
Kana zvasvika kune hutano hwekutarisisa maficha, iyo Apple Watch inogona kusanganisira tembiricha sensor iyo inogona kushandiswa, semuenzaniso, kunzwisisa zviri nani nguva yekubereka kukuru kwevakadzi. Zvinoenderana neruzivo, zvinoita sezvisingaite kuti Apple ikupe chaiyo tembiricha kuyerwa, uye inongokupa ruzivo nezvekuwedzera kana kuderera kwekushisa uchienzaniswa neyakajairwa kuyerwa. Tichafanira kuramba takamirira kuongororwa kweBP kana glucose yeropa. Apo pachava nekuvandudzwa kuchava mukuonekwa kweAtrial Fibrillation, basa rave riri nesu kwemakore uye izvo zvino zvichatizivisawo pamusoro penguva yakareba sei zuva rose munhu akapfeka wachi anga ari mumamiriro e fibrillation.
Pakupedzisira Gurman anotiudza kuti Apple Watch inogona kusanganisira satellite yekubatanidza kutumira emergency uye nzvimbo meseji, chimwe chinhu chinobatsira zvikuru pakaitika njodzi chero ipi zvayo munzvimbo isina kuvharwa kwefoni. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinoda Apple Watch nyowani, nepo vamwe vachiuya kune varidzi varipo nekuda kwekuvandudza software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kuzvitonga kukuru, mativi matsva, tembiricha sensor uye dzimwe nhau dzeApple Watch
Izvi ndizvo zvese zvatinofunga isu tinoziva nezve iOS 16 kusvika zvino
Iyi ndiyo itsva 35W kaviri charger iyo Apple ichavhura munguva pfupi